Jacob Juma oo 'aqbalay' in uu is casilo
Madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma [Sawirka: AFP / GETTY IMAGES]
Johannesburg - Warar soo baxaya ayaa sheegaya in laga yaabo in madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma uu xilka ka dego , waxaana la sheegay in ay u egtahay in uu aqbalay codsiyadii loosoo bandhigay, balse uu soo jeediyay shuruudo.
Xisbiga ANC ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in shirkii ay la yeesheen Zuma ay kasoo baxeen miro wanaagsan, islamarkaasna ay dib u dhigeen shirkii golaha dhexe oo looga doodi lahaa mustaqbalka Zuma.
Sidoo kale baarlamaanka Koonfur Afrika ayaa dib u dhigay waqtigii uu furmi lahaa kalfadhiyada sanadkan, sababo la xiriira mustaqbalka madaxweynaha.
Mar sii horeysay oo shalay ahayd hay'adda Nelson Mandela ayaa ugu baaqday in uu Zuma is casilo, iyada oo sheegtay in intii uu xilka hayay dalka uu ka dhacay boob culus oo hantida dadweynaha loo geystay.
Haddii uu diido go'aanka ANC ee ah in uu is casilo, waxa uu luminayaa aqlabiyadda baarlamaanka, si sahlan ayaana codka kalsoonida loogu qaadi karaa baarlamaanka dhexdiisa, sidaasna uu xilka uga dagi karaa.
Xisbiyada mucaaradka ayaa dhawr jeer Zuma ka keenay mooshin, balse markasta tirada badan ee xildhibaanada ANC ayuu kaga badbaadayay codkaas.
Warar aanan la xaqiijinin ayaa sheegaya in Zuma uu codsaday in damaanad laga siiyo in lagu soo oogi karin wax dacwad ah.
Mustaqbalka Madaxweynaha South Africa oo mugdi ku jira
Caalamka 13.02.2018. 23:19
Madaxweyne Juma oo xafiiska joogay tan iyo 2009 ayaa lagu eedeeyay...
Wiil uu dhalay Mil-yineer oo laayay Qoyskiisa oo Xabsi daa’in lagu xukumay
Caalamka 22.05.2018. 21:50
Iscasilaada Zuma Kadib, maxaa u xiga Koonfur Afrika?
Caalamka 15.02.2018. 11:27
Madaxweyne Jacob Zuma oo diiday inuu is-casilo
Afrika 05.02.2018. 10:09
Dalka South Africa oo yeeshay Madaxweyne cusub
Caalamka 15.02.2018. 16:09
Caalamka 01.02.2018. 13:28
"Boqorka dadka musuqmaasuqa" oo dhageysiga kiiskiisa dib loo dhigay
Afrika 16.10.2019. 07:16